Kudar Goob-Meel ah Nidaam Maareyn Mawduuc kasta | Martech Zone
Axad, Nofeembar, 25, 2012 Isniin, November 26, 2012 Douglas Karr
Sannadkii 2006 waxaan riixayay in kuwa wax dhisa ay korsadaan wax ka bedelid teknoolojiyada… mana aysan sameyn. Lix sano ka dib wali waxaan xoqayaa madaxeyga oo cidina aysan soo saarin nidaam maarayn maareyn weyn leh wax ka bedelid teknooloojiyada.
Waxay u muuqataa in Nuqul ayaa xalinaysa wax ka bedelid caqligal u ah qof walba adoo dhisaya adeeg isku dhafan oo caalami ah. Copybar wuxuu adeegsadaa API-yada ay bixiyaan nidaamyo badan oo maareynta maareynta ah wuxuuna ku siinayaa qaab fudud oo aad ku beddeli karto bartaada goobta, haddii aad isticmaaleyso Shopify ama WordPress. Waxay kaloo bixiyaan wax iyaga u gaar ah API si kuwa kale ee nidaamka maamulka maareynta waxyaabaha ka kooban ay si fudud ugu milmaan qalab-dhismeedkooda.
Si aad u rakibto oo aad u habeysid nuqulka 'Copybar'
Nuqul nuqulkaaga Nuqul-nuqul - Nuqul kasta oo 'Copybar' ah wuxuu ka kooban yahay magaca koontadaada iyo magac cunsur u gaar ah. Ku qor gacanta, isticmaalkeenna cajiibka ah Nuqul Koobiye-Koobiye.
Ku dhaji halkaad rabto - Waxaad dhigi kartaa walxaha 'Copybar' meel kasta oo aad ka geli karto HTML. Fayl HTML ah webhost-kaaga. Tifatirahaaga WordPress ee arag. In goobaha mawduuca ee Tumblr ama Shopify. Sidee ayaad hal-abuur ugu lahaan doontaa walxahaaga 'Copybar'?
Guji 'Add Nuqul' - Rar boggaaga (waxay u baahan tahay inay la noolaato server). Dhagsii badhanka cusub ee 'Add Copy', wax samee, ka dibna riix 'Keyd'. Cunsurkaaga 'Copybar element' wuxuu umuuqdaa qayb udhashay boggaaga, laakiin waad kusii wadi kartaa inaad si toos ah wax uga bedesho. Adiguna waad ku dari kartaa wada shaqeyn si ay usameeyaan, sidoo kale.
Xuquuqda daabacaaddu ma aha oo keliya bar-tilmaameedka dhabta ah, waxaa jira is-dhexgal maamul oo dhan oo laga heli karo gadaashiisa adiga. Copybar wuxuu leeyahay qalab lagu maareeyo dhammaan walxahaaga nuqul ka mid ah barnaamij web dareen leh. Waad la socon kartaa mid kasta oo ka mid ah walxahaaga 'Copybar', halka ay ka muuqdaan, iyo cidda kale ee iskaashaneysa.
Sicir bararku waa wax layaableh, kaliya $ 4.95 bishiiba walxaha aan xadidnayn, wada-hawlgalayaasha aan xadidnayn iyo awoodda lagu beddelayo ama lagu dallaco calaamadda 'Copybar'
Tags: nuqulwax ka bedeliddukaankaWordPress
SlideDog: Soo bandhig Faylasha si habsami leh
Nov 29, 2012 saacadu markay tahay 11:56 PM
Aad baad ugu mahadsantahay wadaagida tan. Waa gargaar weyn. Shaqo wanaagsan!